हुवावे वाई–७ स्मार्टफोन बजारमा — SaharaPati
हुवावे वाई–७ स्मार्टफोन बजारमा
हुवावे कम्पनीले नयाँ स्मार्टफोन वाई–७ नेपाली बजारमा ल्याएको छ।
कम मूल्यमा उत्कृष्ट कार्यक्षमता भएको स्मार्टफोनहरू ल्याउने प्रतिबद्धताअनुरूप यो फोन ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ।
तीनवटा रंगहरू नीलो, कालो र रातो रंगमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य भने १९ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
६.२६ इन्चको ठूलो ड्यु ड्रप डिस्प्ले, १३ एमपी+ २एमपीको मास्टर एआई सपोर्टयुक्त एआई क्यामरा र दुई दिनसम्म चल्ने ४ हजार एमएमएच क्षमताको ब्याट्री र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
फोनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत ब्याट्री सात सय पटकसम्म चार्ज गर्दा पूर्ण क्षमता दिन्छ जसको अर्थ हो दुई वर्षसम्म सामान्य तरिकाबाट चार्ज गर्दा पनि ब्याट्री भरपर्दो र राम्रो अवस्थामा रहन्छ ।
भिडियो मन पराउने अहिलेको पुस्ताका लागि ठूलो डिस्प्ले दिनका लागि हुवावेले नयाँ हुवावे ड्यु ड्रप डिस्प्ले फोनमा रहेको छ। त्यस्तै ८६.७ प्रतिशत स्क्रीन–टु–टीपी रेसियो यसमा रहेको छ।
हुवावे वाई सेभेन २०१९ मा फेश अनलक २.० रहेको छ जसले मोबाइलफोन खोल्न छिटो र सहज हुन्छ । यो स्मार्टफोनले प्रयोगकर्ताको पहिचानलाई प्रमाणीकृत गर्दछ र मात्र मोबाइलफोन अनलक हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरूले अन–स्क्रीन निर्देशनहरूपछि आफ्नो प्रोफाइल राख्न सक्छन् ।
थप सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको अनुहारको विवरण वाई सेभेन २०१९ अबमा सदाका लागि सेभ हुन्छ ।
वाई सेभेन २०१९ ले डुलल फोर जी र डुअल भिओलटीई सपोर्ट गर्दछ । यो विशेषताका कारण प्रयोगकर्ताहरूले एकैचोटि एउटा सिमबाट फोन गर्न र अर्कोबाट मोबाइल डाटा चलाउन सक्छन्।
वाई सेभेन २०१९मा ५१२ जीबीसम्मको एक्पान्डेबल मेमोरी छ र मेमोरी कार्ड राख्न मिल्ने सुविधा छ । ३२ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज पनि यो स्मार्टफोनमा रहेकाले सबै तस्वीरहरू, भिडियोहरू, गेमहरू सजिलै स्टोर गर्न सकिन्छ।
पत्रकार महासंघ पर्वतलाई बाराही ईन्टरनेटले निशुल्क ईन्टरनेट प्रदान गर्यो…
आयो फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन
३५ देशमा फेसबुकका ८२ कार्यालय, नेपालमा किन दर्ता नहुने ? कर किन नतिर्ने ?
के साच्चिँकै सरकार फेसबुक–ट्वीटर बन्द गर्न लागेको हो? यस्तो छ धारणा
नेविसंघद्वारा कुश्मामा निशुल्क १ महिने कम्प्युटर तालिम, पार्टी सभापतिले गरे उद्घाटन